Ikhaya STARS E-EUROPE I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Magnifico". Indaba yethu ye-Lorenzo Insigne yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela esikhathini sokubuntana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngejubane lakhe kanye nomgomo-wokulinganisa ukulingana kodwa abambalwa abheka i-Bio yethu ye-Lorenzo Insigne ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
U-Lorenzo Insigne wazalelwa ngosuku lwe-4th lukaJune 1991 e-Frattamaggiore, e-Italy. Wayengumntwana wesibili owazalwa nonina uPatrizia Insigne noyise uCarmine Insigne.
Ukukhula e-Frattamaggiore (okufanekiselwe ngezansi) eyaziwa kakhulu ngokukhiqiza izinombolo zezinkundla zebhola ezihlanganisa U-Arturo Lupoli futhi Francesco Lodi, uLunnzo osemncane, waqala inselele ekuphileni.
Abazali bakaL Lorenzo babenzima ukukhulisa yena nabafowabo abathathu emzini omncane owakwazi ukuqinisekiswa ukuphila okunethezeka komndeni omkhulu njengoLorenzo. Isimo sathinteka nakakhulu lapho uCarmine Insigne (ubaba kaLornzo) enza umsebenzi okhululekile emsebenzini, intuthuko eyenza ugogo nomkhulu kaLornzo ukuba basize ukuvimbela ubunzima bokukhulisa abazukulu babo.
Naphezu kwezinselelo ezazihlangenwe nakho, u-Lorenzo oye waba nesithakazelo esithakazelisayo ebhokisini akakaze ahluke kusukela ebusweni bakhe obuntwaneni. KuLornzo, ukuthakazelisa ukudlala ibhola kwakungokwemvelo njengoba nje ukudla kuvela ngokwemvelo ezinganeni, iqiniso lokuthi umama kaLornzo ukhumbula ngokuveza lokho;
"Ngesikhathi eseyingane, uLeonzo wadla phakathi kweMouthfuls futhi ubelokhu enebhola ezinyaweni lapho ekhona."
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Umsebenzi we-Buildup
Ngenhloso yokweseka imizamo yabazali bakhe nogogo nomkhulu, uLorzzo waqala umsebenzi emakethe lapho athengisa khona izingubo. Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuba enze imali eyanele yokuzithengela i-Ronaldo R9 jersey yebhola lakhe lezingane ebuntwaneni, i-Brazillian Ronaldo.
Imali evela ekuthengiseni nayo yasisiza ukuthuthukisa izintshisekelo zayo ezinkampanini zentsha yokuqala eyayiyi-Olimpia Sant Arpino lapho uLorenzo esebenzisa khona ingxenye engcono yeminyaka yakhe yokuhlela.
Ngesikhathi e-Olimpia, uLornzo wenza okuningi ukuze enze isiqu sakhe esincane siphume njengengenalutho ekusebenzeni kwakhe ngokudonsa imigomo emangalisayo. Imizamo yakhe yabuyiselwa lapho ama-scouts avela eNapoli ayengakunaki ubukhulu bakhe futhi amyisa eThekwini leNtsha leNapoli lapho e-15 kuphela.
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Ukuphakama Ekudumeni
Kwakuyiqembu le-Napoli yentsha ukuthi uLornzo uqale umgwaqo ozohamba nodumo ngenhloso yakhe yokulinganisa iqembu lakhe lePlamavera. I-football eyayihamba phambili ibona ukuthi uLornzo ubolekise amakilabhu angomakhelwane ahlanganisa uCavese, Foggia noPascara lapho esiza khona iqembu ukuba liwine inhloko yeSerie B futhi iqede ukukhishwa imali.
Intuthuko yakhe ayizange ibonakale eqenjini lakhe elimenze lamnika indawo eqenjini lokuqala leqembu. Ngenxa yalokho, wenza iqembu lakhe le-Serie A ne-UEFA ekuqaleni kwe-2012 kanye ne-2013 ngokulandelana ngokubonisa ukusebenzisana nanoma yimuphi umgogodla, isivinini kanye nomgomo wokufaka amagoli nokusiza amakhono angasiza nje uNapoli ukuqhubekela phambili emikhankaso ehlukahlukene kodwa wamqinisekisa ukuba enze i-debut I-2014 World Cup ye-Italy. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Ukuphila Ubudlelwano
U-Lorenzo Insigne usebudlelwane obude nentombi yakhe noma uWag waphendukela umkakhe, uGenoveffa Darone abaningi bakholelwa ukuthi i-Insigne ayengeke ibe yinkanyezi ngaphandle kwethonya layo empilweni yakhe.
Lo mbhangqwana wahlangana eNaples ngenkathi i-Insigne idlala iPascara, umhlangano owawuhlala njalo u-Insigne ngokukhumbula ukuthi:
"Kusukela lapho ngimbona, ngangazi ukuthi ngifuna ukuba naye"
Ukudlala ngemalimboleko yePercara wabona i-Insigne ihlala i-250km ukusuka eNaples lapho uGenvevea ehlala khona. Ngenxa yalokho, i-Insigne isebenze kanzima ngokufaka amagoli we-19 ku-Pescara ukuqinisekisa ukuthi uNapoli wambiza futhi wandisa, ukuqinisekisa ukuthi uhlala eduze noGenoveffa.
Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuba lo mbhangqwana ushade ngo-31st kaDisemba 2012. Ubuhlobo babo bubusiswe ngamadodana amabili uCarmine Insigne (owazalwa nge-2013) no-Christian Insigne (owazalwa nge-2015).
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Izinkinga zokuphakama
Omunye akakwazi ukukhuluma nge-Insigne ngaphandle kokuxoxisana nendaba yokuphakama kwakhe. Ukuma ku-1.63 m (njengamanje) Ukuphakama kwe-insigne kuqhubeka kumzingela ngendlela ehlukile kusuka ekutheni kuye kwaholela ekulahlekeni amaphupho okudlala ibhola ezingeni lobuchwepheshe ngesikhathi sakhe sekhono lomsebenzi.
"E-Italy, ama-Scouts athembeke kakhulu, ahlale ethi" Siyamthanda, kodwa unesihluthulelo. "Ngangikhathele isikhathi esengeziwe, nginakekele izinhlelo zokuyeka futhi ngizovuka njalo ekuseni ngithemba ukuthi ngizokhula ebusuku".
Ngokusheshisa ukuphakama kwe-Insigne, udumo lwe-football genius aluzingeli ngendlela edabukisayo njengalokhu lusetshenziselwa kodwa luye lwaba yimpumelelo yamahlaya njengoba ebonakala sengathi ahlale enganaki lapho ehlangene namaMascots.
Omunye angathanda ukuphikisa ukuthi i-Insigne ithola ukungathandeki ngamascots ngesikhathi sokubonakala kwethimba likazwelonke lase-Italy, kodwa izigameko ezifanayo zenzeka ngesikhathi ebonakala eceleni kweqembu.
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-I-Mugging Incident
Isigameko esidabukisayo esenza okuningi ekuqedeni ukungavikeleki emzini waseNaples kwaba ukuphanga kwe-Insigne nomkakhe ngesibhamu. I-Insigne ibeshayela edolobheni laseNaples lapho abaphangi ababili begibela isithuthuthu behamba ngaseceleni kwemoto ngesikhathi bebanjwe emotweni.
Abaphangi abashisa isibhamu e-Insigne nomkakhe baphoqeleka ukuthi i-duo ihambe ngokubuka i-Rolex watch, isongo lesidayimani ne-800 euros ngemali. Okumangalisa kakhulu ukuthi abaphangi babengazi ukuthi isisulu sabo sasinjani njengoba bamfungisa ukufaka umgomo kuNapoli ngokumelene neFiorentina emdlalweni ozayo.
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Isizathu Esiphezulu Sesidlaliso
I-Insigne ibizwe ngegama "Lorenzo Il Magnifico " ngabalobi bezemidlalo nabalandeli ngokukwazi kwakhe ukufaka umgomo wakhe nokusiza amakhono ekushintsheni umdlalo onzima wenzuzo yeqembu lakhe.
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Ama-Idols webhola
I-Insigne ikhule ithanda i- Umlando weBrazil waseBrazil, uRonaldo ngokumelene Maradona. Uthando ayenalo ngoRonaldo lwaboniswa izifiso zakhe zezinkinobho zebhola likaRonaldo ikakhulukazi amabhukwana e-R9s afika ngesiliva, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka nephuzi (okufanekiselwa ngezansi). Uthando lwakhe ngalolu daba lwangcolisa ukucabanga njengoba uRonalddo owayedlala i-Inter Milan ngaleso sikhathi wayaziwa ngesihluku ngokumelene noNapoli (club yasekhaya yase-Insigne).
"Ubaba wayengumsizi omkhulu weNapoli nomfana omkhulu weMaradonA, kanti noRonaldo wadlala i-Inter ngalesi sikhathi, futhi wenza uNapoli ekhala. Kodwa ngangisemncane nje. Ngangingazi kangcono, futhi ngangiziqhenya kakhulu nge-boot R9s lapho ubaba engithenga khona ngoba i bakholelwa ukuthi kungenza ngidlale njengoRonaldo ".
Kodwa-ke, i-Insigne ikhulile ukuze ihloniphe uMaradona njengoba manje (i-Insigne) idlala i-Napoli futhi ibona ngokugcwele ukuthi kusho ukuthini ukudlala endaweni efanayo lapho uMaradona adlala khona.
"Ngenhlonipho efanele kuRonaldo, njengoba sengimdala, futhi ngiyazi umlando wami, kufanele ngiphenduke futhi ngithi uMaradona nguye omkhulu kunabo bonke abawake baphila. Mnu Ronaldo, ube nezicathulo ezinkulu. Wena ungumuntu ohlakaniphile. Wena wawuphefumlelwe. Kodwa mina nginguNeapolitan, ngakho-ke kufanele ngithi kukhona inkosi eyodwa kuphela, negama lakhe nguGeorge ".
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts-Imininingwane yomuntu
I-Insigne ngumdlali onqume ukuthi angayeka lutho ukuze azibonakalise ukuthi ufanelwe lokho akufunayo. Lokhu kubonakala ekusebenzeni kwakhe okuthakazelisayo ePascara okungamzuzanga nje indawo eNapoli kepha kwasondeza othandweni lwempilo yakhe.
Ngaphezu kwalokho, uthanda ukuthintana nabangani bakhe, umndeni wakhe nanoma ubani onomlando omuhle.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Lorenzo Insigne yobuntwana kanye namaqiniso angabonakali we-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
vannyhenrico - December 14, 2019